मंसिर २, काठमाडौं । कात्तिक २६ गतेदेखि विक्रीमा आएको माउण्टेन इनर्जी नेपालको आईपीओ भर्ने बुधवार अन्तिम दिन रहेको छ । छिटो अवधि मंसिर २ गतेसम्म विक्रीमा रहने भनिएपनि उक्त दिन सार्वजनिक विदा परेकाले एक दिन थप गरी मंसिर ३ गतेसम्मको अवधि कायम गरिएको हो ।
कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको कुल १९ लाख ६८ हजार २७ कित्तामध्ये १८ लाख ३० हजार २६५ कित्ता शेयर सार्वजनिक निष्कासन मार्फत विक्री खुला गरेको हो । कुल कित्तामध्ये बाँकी ३९ हजार ३६१ कित्ता कर्मचारीहरुलाई सुरक्षित गरी ९८ लाख ४०१ कित्ता शेयर सामूहिक लगानीकोषका लागि बाँडफाँट गरेको छ ।
कम्पनीले यसअघि आयोजना प्रभावित नुवाकोट र म्याग्दी जिल्लाका स्थानियको लागि १९ लाख ६८ हजार २७ कित्ता शेयर विक्री गरेको थियो ।
स्थानियका लागि कम्पनीले भदौ ३१ गतेदेखि असोज २९ गतेसम्म आईपीओ विक्री गरी कात्तिक ६ गते बाँडफाँट गरेको हो । यस कम्पनीको आईपीओ विक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ लिमिटेड र सिबिआईएल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
सर्वसाधारणले आईपीओ खरीदको लागि आवेदन दिंदा विक्री प्रबन्धकसँगै आस्वा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् भने मेरो शेयर सफ्टवेयरमार्फत पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
यस कम्पनीले म्यादी जिल्लामा ३८ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानियका लागि छुट्याएको कुल कित्तामध्ये नुवाकोट र म्याग्दी जिल्लाको अति प्रभावितको लागि ६० प्रतिशत र प्रभावितका लागि ४० प्रतिशत शेयर छ्ट्याएको छ ।
कम्पनीको यस आईपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले वित्तीय अवस्था औषतभन्दा कमजोर रहेको संकेत गर्ने केयर एनपी ग्रेड ४ प्रदान गरेको छ । यस कम्पनीको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ २०७६ चैत मसान्तसम्ममा रू. ११८ दशमलव ३२ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा रू. १२३ दशमलव ४० प्रतिशेयर नेटवर्थ कायम गर्ने प्रक्षेपण कम्पनीले गरेको थियो । वास्तविक प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३ दशमलव ५१ रहेको छ ।